RASMI: Laacibkii Liverpool ee Joe Allen oo ku biiray mid ka mid ah kooxaha Premier League… (Muuqaal + Sawirro) – Gool FM
RASMI: Laacibkii Liverpool ee Joe Allen oo ku biiray mid ka mid ah kooxaha Premier League… (Muuqaal + Sawirro)
(Stoke-on-Trent) 26 Luuliyo 2016 – Kooxda kubadda cagta Stoke City ayaa xaqiijisay inay la soo wareegeen laacibkii khadka dhexe ee Liverpool, isla markaana uu qalinka ugu duubay heshiis shan sanadood ah.
Xidigga xulka qaranka Wales, kaasoo kooxda Reds kaga soo biiray Swansea City xagaagii 2012-kii ayaa Bet365 Stadium ugu dhaqaaqay adduun lagu qiyaasay £13m.
“Waxay ahayd dabayl cirwareenta ah 48 saacadood, laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambayntii awoodo inaan qalinka warqadda dul dhigo” ayuu Allen u sheegay website-ka rasmiga ah ee kooxda Potters lagu naanayso.
26-sano jirkaan khadka dhexe ayaa loo magacaabay kooxda Euro 2016 ee tartanka, kaddib markii uu xulkiisa Wales ka caawiyey inay gaaray afar dhammaadka koobka qarammada Yurub.
Allen ayaa noqonaya saxiixii labaad xagaaga ee Stoke, kaddib markii ay horay kooxdu ula soo wareegtay laacibka reer Masar ee Ramadan Sobhi.
Maxaa ka jira in Per Mertesacker uu garoomada ka maqnaan doono 5-bil?
Jubbaland iyo Puntland oo galabta ciyaaraya Finalka tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya